I-China i-30cm yokuphinda isetyenziselwe ukuphinda isebenze nge-tube enomsonto kunye neqhekeza lobusi kunye neFektri | UKUQINISEKISA
Le contraption enkulu ilinganisa i-intshi ezili-14 ubude kwaye ixhotyiswe ngee-percolator ezininzi kunye nendlela yomoya ende kakhulu enika umsi wakho ixesha elaneleyo lokuphola ngaphakathi kwiglasi ye-borosilicate. Ukubetha ngakunye kuqala uhambo lwayo ngokusebenzisa isiseko esisekude esisezantsi esikhokelela kumsi wakho kumbhobho wamanzi apho utyikityo lomqhubi wephercolator usasaza ngokukhawuleza umsi wakho emanzini.
Le perc yodwa yaqanjwa ngegama layo elifana ngokusondeleyo nevili lokuqhuba leenqanawa kunye neempawu ezili-10 zeedisksi ezixhotyiswe ngeglasi encinci ezicoca ngokufanelekileyo hit nganye kwasekuqaleni.
Ukunyuka uye phezulu, umsi wakho uza kwahlulwa ube ziindlela ezintathu (kodwa zilingane) zendlela. Ikhoyili ejikelezayo ngaphakathi kwalo mbhobho wamanzi ineyona ndlela inde yomoya kwaye yenza umboniso omangalisayo ngelixa amagumbi amabini okurisayikilisha ngasemva axhotyiswe nge-honeycomb disc percolators zamandla okupholisa aphezulu. Njengoko uqhubeka uphefumlela phezulu, amanzi asuka kwisiseko aya kutsalwa kula magumbi avumela i-perc nganye ukuba ibe kwimeko yokufuma kakuhle yonke imfucumfucu yokugqibelela. Le trifecta intle idibana nayo phezulu phezulu apho elona gumbi likhulu lokuphinda lisetyenziswe linika umsi wakho umnxeba wokugqibela wokupholisa ngaphambi kokufikelela kwintamo ethe nkqo yomlomo. Sincoma ukuzalisa isiseko seMicroscope Recycler Bong malunga nendlela epheleleyo yokufumana ukusebenza okupheleleyo kombhobho wamanzi.
Nganye yezi bongs zeglasi yesayensi ibandakanya isiqwenga sesitya sendoda esine-14mm yamayeza akho, kunye neprimiyamu ye-14mm ye-quartz banger yesonka esimnandi esisezantsi esivela kwizingxube zakho. Isiseko esisisigxina siqiniswa luqhagamshelo lweglasi olukhusela isiseko sendibaniselwano kwigumbi elikhulu lokurisayikilisha ngaphezulu kokuthembeka okuhlala ixesha elide, ngelixa isiseko esomeleleyo esivuthayo sisebenza ukuqinisekisa ukuba utyalomali lwakho olutsha luhlala luhleli nkqo xa usetafileni. I-Microscope Recycler Bong igqityiwe kunye neerali zikaMaria ezisetyenzisiweyo ezifakwe kwisiseko esisigxina kunye nokuhambelana kombala we-teal kwi-pirates helm percolator, i-honeycomb percs, i-base flared, i-reinforced joint and flared mouthpiece.
Egqithileyo intengiso eshushu enkulu yokuphinda isebenze i-bong
Okulandelayo: I-35cm yeglasi yokurisayikilisha yeglasi